Waa maxay u jeedka Madaxweyne Farmaajo ka lee yahay Shirka Garoowe | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Waa maxay u jeedka Madaxweyne Farmaajo ka lee yahay Shirka Garoowe
Waa maxay u jeedka Madaxweyne Farmaajo ka lee yahay Shirka Garoowe
Madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa xalay iclaamiyay shir kale oo looga hadlayo arimaha doorashooyinka dalka , waxaana shirkan isugu imaanaya dowlada federaalka iyo dowlad goboleedyada.
Musharax Madaxweyne Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa sheegay in Farmaajo ujeedka uu shirkan u iclaamiyay ay tahay in uu ku moodo shirkii xalay Golaha Amaanka uga hadleen xaalada Soomaaliya .
Waxa uu sidoo kale sheegay Musharaxa in Farmaajo doonayo in shirkan isaga horkeeno maamulada Puntland iyo Galmudeug sidoo kale maamulka Puntland ku tuso in wali uu yahay Madaxweynaha Soomaaliya.
”Shirka uu Madaxweynihii hore Farmaajo soo tuuray, koox ka mid ah beesha caalamkana la wadaan wuxuu ku doonayaa:- 1- In uu ku moodo Shirka maanta Golaha Amaanka ee Soomaaliya looga hadlayo. 2- In uu Galmudug iyo Puntland iska hor keeno 3- In uu tusiyo in uu weli madaxweyne yahay. Waxaanse rajaynayaa in Puntland ay fahmi karto fitnada Farmaajo, diktatoor dhacayna fursad siin doonin.” ayuu yiri C C Warsame.
Shirkan Madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday ee Soomaaliya uu mar kale iclaamiyay ayaa kusoo aadeysa xili uu dhamaaday mudo xileedkiisa walina aan heshiis laga gaarin doorashada, waxaana shirkan ku dhashay cadaadis ka yimid beesha caalamka.
Previous articleWar deg deg ah Puntland po ku gacan seertay in shir ka Farmaajo ku baaqay lagu qabto Garoowe
Next articleGolaha Amaanka oo ka shiray xaalada Dalka Soomaaliya
shacabka Falastiiniyiinta oo billaabay inay ku dibad-baxaan Madaxweynaha Falastiin maxamuud Cabaas
Mohamed Abdullahi Mohamed - July 4, 2021 0
Boqolaal Falastiiniyiin ah ayaa Sabtidii isugu soo baxay magaalada Ramallah ee Daanta Galbeed ee la haysto, ayaga oo ka banaan-baxaya madaxweyne Maxamuud Cabaas, xilli...
Madaxweynaha dowladda Puntland Deni oo saakay ku wajahan Garowe kadib markii...
Maxaa soo kordhay dhanka khilaafka doorashada …?
Ammaanka xarunta Capitol Hill oo aad loo adkeeyay, kadib xog la...
Madaxweynaha Koonfur Galbeed Lafta Gareen oo Baydhabo ku qaabilay saraakiil...
Rag hubeysan oo dhowr arday ah ka afduubtay kuleej ku yaalla...
Khudbadii furitaanka ee Agaasimaha Guud ee WHO ee warbaahinta kooban ee...
Magaalada Addis Ababa oo lagu saxiixay Heshiis lagu joojinayo Dagaalka...